विश्वका ५ धनी फुटबलरः को कति नम्बरमा? – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौंः प्राय अधिकांश फुटबल प्रेमीहरुले आफ्ना खेलाडीको जानकारी राखेका हुन्छन् । फुटबल खेलाडीहरुसँग जोडिएको आकर्षक पक्षमध्ये एक हो, उनीहरुको सम्पति र जीवनशैली ।
फुटबल खेलेर धेरै जसो खेलाडीहरुले राम्रो कमाई गरेका हुन्छन् । धेरैजसो खेलाडीले फुटबलबाट नाम र दाम दुबै प्रशस्त कमाउँछन् । वर्तमान समयमा विश्वका पाँच धनी फुटबलरहरु यी हुन् ।
१. फैक जेफ्री बोल्किआ
ब्रुनाइका सुल्तान हस्सानल बोल्किआका भतिज फैक विश्वकै धनी फुटबलरमध्ये पहिलो नम्बरमा पर्दछन् । अध्यनकाअनुसार फैकसँग २० बिलियन बराबरको सम्पति रहेको छ । उनी प्रिमियर लिग क्लब लेस्टर सीटीका मिडफिल्डर हुन् भने ब्रुनाइको राष्ट्रिय टिमका लागि पनि खेल्दछन् ।
पोर्चुगल तथा सीरी ‘ए’ क्लब युभेन्टसका स्टार रोनाल्डोका लागि युभेन्टसले वार्षिक ३० मिलियन डलर खर्चिने गरेको बताइएको छ । उनको आफ्नै कपडा ब्रान्ड छ भने उनी फुटबलबाट सन्यासपछि अभिनयमा लाग्ने बताएका छन् ।
उनीसँग ४५० मिलियन बराबरको सम्पति रहेको बताइएको छ । रोनाल्डो पाँच पटकको बालोन डी ओर तथा ५ पटकको च्याम्पियन्स लिग विजेता समेत हुन् ।
३‍‍‍‍. डेभिड बेक्ह्याम
डेभिड बेकह्यामले फुटबलबाट सन्यास लिइसकेका छन् । उनी अहिले आफ्नो छुट्टै क्लब स्थापित गर्न लागिपरेका छन् । उनले मेजर लिग सकरमा नयाँ क्लब इन्टर मायामीको स्थापना गरेका छन् । डेभिडसँग ४५० मिलियन बराबरको सम्पति रहेको बताइएको छ ।
Copyright Shutterstock 2019;80837730;3500;2336;1558884219;Sun, 26 May 2019 15:23:39 GMT;0
४. लियोनल मेस्सी
लियोनल मेस्सी स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान हुन् भने उनी ६ पटकको बालोन ‘डि’ ओर विजेतासमेत हुन् । मेस्सीसँग ४०० मिलियन बराबरको सम्पति भएको बताइएको छ । मेस्सीका थिएगो, मेटो र सिरो गरी ३ जना छोराहरु छन् ।
ब्राजिलका नेयमार सबैभन्दा धनी फुटबलरमध्ये पाँचौ स्थानमा पर्दछन् । नेयमारले २००३ मा सान्टोसबाट फुटबलको यात्रा सुरु गरेका थिए । भने उनी २०१३ मा बार्सिलोना आएका थिए र त्यही समयदेखि चर्चा बटुल्न सफल भए ।
नेयमारसँग ३५० मिलियन बराबरको सम्पति रहेको बताइएको छ । नेयमार विश्वकै सबैभन्दा अधिक रकममा अनुबन्धित भएका खेलाडी पनि हुन् । उनी २०१७ मा २२२ मिलियन पाउन्डमा पीएसजीमा अनुबन्धित भएका थिए ।
ट्याग्स: धनी फुटबलर